‘डब्ल्लूएचओ’ले तीन नयाँ भेरियन्टको नाम जिटा, इटा र थिटा राख्यो, यी भेरियन्ट कुनकुन मुलुकमा फैलिएका छन् ? — Imandarmedia.com
‘डब्ल्लूएचओ’ले तीन नयाँ भेरियन्टको नाम जिटा, इटा र थिटा राख्यो, यी भेरियन्ट कुनकुन मुलुकमा फैलिएका छन् ?
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले थप तीन भेरियन्टलाई ग्रीक अल्फाबेटअनुसार विभिन्न नाम दिएको छ ।अहिले नयाँ नाम दिइएका तीनओटा भेरियन्ट अफ कन्सर्न (भीओसी) हरुमा जिटा (पी.२), इटा (बी.१.५२५) र थिटा (पी.३) छन् । यीनीहरुको जनस्वास्थ्यमा कति असर पर्छ भन्ने अध्ययनकै क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण पौडेलले बताए ।
पहिलो लहरको कोरोनाबाहेक नेपालमा पनि गामा र डेल्टा नामक भेरियन्टले ठूलो असर पारेको उनले बताए । यसअघि मुलुकमा उत्पत्ति भएको आधारमा कोरोना भेरियन्टलाई चिनिने गरेको थियो । विभिन्न देशले यसमा आपत्ति जनाएपछि डब्ल्यूएचओले उक्त भेरियन्टहरुलाई ग्रीक अल्फाबेटअनुसारको नाम दिएको हो ।
यस्तै विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ३७ लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ९२५ जनाको मृत्यु भएकोसँगै विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ३७ लाख नाघेको हो । पछिल्लो वृद्धिसँगै मृतक संख्या ३७ लाख ५ हजार ९४२ पुगेको छ ।
कोरोनाले विश्वमा सबैभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावित भएको छ । हालसम्म अमेरिकामा ६ लाख १० हजार ९९३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी ब्राजिलमा ४ लाख ६७ हजार ७०६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृतकका आधारमा भारत तेस्रो स्थानमा रहे पनि दोस्रो लहरको संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको छ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २८ सय जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ मृतक संख्या ३ लाख ३८ हजार १३ पुगेको छ । दैनिक संक्रमण वृद्धिका आधारमा भारत अहिले विश्वकै अतिप्रभावित मुलुकमा छ ।
भारतमा पहिलो पटक शनिबार (१८ वैशाखमा) कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि ४ लाख नाघेकोमा आज त्यो संख्या १ लाख ३४ हजार १०५ मा झरेको छ ।
विश्वभर निको हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर संक्रमितभन्दा निको हुने धेरै छन् । २४ घण्टामा ४ लाख ८७ हजार ५९३ जनामा संक्रमण देखिँदा ६ लाख ४१ हजार १२३ जना निको भएका छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार विश्वभर निको हुनेको संख्या १५ करोड ५२ लाख ४६ हजार ७८२ पुगेको छ ।